C.Ronaldo Iyo Ciyaartooyda Kale Ee Horyaalka Talyaaniga Oo Wejiyadooda La Marin Doono Midabada Beddelaya Muuqaalkooda Kulamada Toddobaadkan – Radio
Horyaalka kubadda cagta Talyaaniga, waxa toddobaadkan ay ciyaartooyadu noqon doonaan kuwa aanay taageereyaashu arki doonin midabkoodii saxda ahaa ee ay ku yaqaaneen, kaddib markii maamulka horyaalku uu go’aamiyey in laacibiinta midab laga mariyo wejiga.
Horraantii xili ciyaareedkan ayaa kulamadii horyaalka Serie A lagu arkay ciyaartooyada oo midab casaan ah laga mariyey kulamo waqtigaas qabsoomay, laakiin mar kale ayay arrintaasi soo noqonaysaa usbuuca soo socda, markaas oo ciyaartooyada oo dhan ranji laga marin doono wejiga.
Arrintan oo looga jeedo in ciyaartooyadu qayb ka qaataan rabshadaha iyo tacaddiyada ka dhanka ah haweenka, oo ay bilowday qaramada Midoobay ayaa uu horyaalku markii labaad oo xidhiidh ah ka qayb-qaadanayaa.
Mashruucan oo ay hoggaaminayso hay’adda We World Onlus oo labaatankii sannadood ee u dambeeyey ka shaqaynaysay arrimo la xidhiidha difaaca xuquuqda haweenka iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah, ayaa waxay calaamad cas oo wejiga layska marinayo u astaysay xuska maalinta cidhib-tirka tacadiyada haweenka oo dunida oo dhan laga qabanayo.
Xiddiga Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horreysay ka qayb-qaadan doona ololahan, waxaana wejiga laga marin doonaa midab casaan ah
Marco Chiesara oo ah madaxweynaha WeWorld Onlus ayaa waxa uu sheegay in ololaha oo sannadkan horyaalka Serie A uu ka caawinayo uu gudbin doono farriin xoog badan oo ay kusoo bandhigayaan tacaddiyada ka dhanka ah haweenka iyo sidoo kale wacyigelin ay dadka gaadhsiinayaan.
Ololaha ayaa waxa loo isticmaalayaa sannadkan hal-qabsiga Twitterka ee loo yaqaano Hashtag (#) oo noqonaya #unrossoallaviolenza.
Ciidamada Booliska Minnesota waxa ay xireen Lloyd Edward Johnson, oo da'diisu tahay 55 jir ka ...